ONIVERSITEN’ANTANANARIVO : Hiara-hiasa amin’ny Oniversiten’i Kyoto any Japon
Hiara-hiasa ny oniversiten’Antananarivo sy ny Oniversiten’i Kyoto, any Japon. Tontosa omaly teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo ny fifanaovan-tsonia. 22 août 2019
Ny oniversiten’i Kyoto dia isan’ireo oniversite sangany ao Azia sy maneran-tany mihitsy noho ny fananany ireo voka-pikarohana miavaka eo amin’ny lafiny ara-tsiansa. Manana « Prix Nobel » miisa 10 izy ireo amin’izao fotoana izao, araka ny fampahafantarana nataon’ny filohan’ity oniversite ity ary mpianatra avy amin’ny firenena maro no tonga mandranto fianarana any an-toerana.
Misy vina lavitr’ezaka sy fohy ezaka iarahan’ny oniversite roa tonta miasa. Eo amin’ny lafiny ara-tsiansa, ohatra, dia isan’ny tombony ho an’i Japon ny fahafantarany ireo biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, hita any amin’iny Faritra atsimon’i Nosy iny. Tombony lehibe ny fisian’io satria mampiroborobo ny toekarena malagasy eo amin’ny lafin’ny fizahan-tany izany no sady mampidi-bola vahiny betsaka ihany koa. « Tato ho ato dia mpizaha tany avy any Japon maro no tonga mitsidika an’i Madagasikara, efa manomboka fantatr’izao tontolo izao i Madagasikara fa indrindra ny mahakasika ireo biby tsy fahita raha tsy eto amintsika. Azo araraotina io mba hampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany », hoy ny filohan’ny Oniversiten’ Antananarivo, Profesora Mamy Ravelomanana. Nambaran’ity farany ihany koa fa teo amin’ny fakiolten’ny siantsa no nanomboka ny fiaraha-miasa ary vinavinaina hiitatra eo amin’ny sehatra maro izany.
Firenena matanjaka sy manana ny heriny eo amin’ny fampiasana teknolojia vaovao i Japon. Noho io tanjany io indrindra no nampirisika ireo mpampianatra mpikaroka eny amin’ny Oniversiten’ Antananarivo nitady fiaraha-miasa tamin’ity Onivesiten’i Kyoto ity. Fantatra fa hanampy ny Oniversiten’Antananarivo amin’ny fandefasana mpampianatra eto amintsika ny Oniversiten’i Kyoto ary hanohana ara-pitaovana ihany koa hiatrehana ny rafitra LMD. Mba hahazoan’ny an-daniny sy ny an-kilany tombotsoa dia nangatahin’ireo mampianatra mpikaroka ny fanamorana ny tataon-ketra alaina amin’ny fampidirana ireo fitaovana ara-kajy mirindra ireo.
« Ny zavatra tsy maintsy horesahana amin’ny minisitera dia hanalana na hanamorana ny tataon-ketra alain’ny fanjakana amin’ireo fitaovana omen’ny oniversiten’i Kyoto an’i Madagasikara satria raha mbola ry zareo no handoa io tataon-ketra io dia mety hanahirana ihany », hoy ny Profesora Hajanirina Rakotomanana, isan’ireo angady nananana tamin’ny fitadiavana ity fifandraisana ity.